कोरोना जितेका युवक भन्छन्- आत्मविश्वासले कोरोना जितिने रहेछ – Khabar Silo
कोरोना जितेका युवक भन्छन्- आत्मविश्वासले कोरोना जितिने रहेछ
१५ जेठ, कैलाली । १६ दिन सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेर कोरोना जितेर घर फर्किएका थिए लम्किचुहा-७ का २१ वर्षीय युवक ।
चैत्र २३ गते आइसोलेसनमा भर्ना भएका उनी वैशाख ७ गते डिस्चार्ज भए । निको भएको एक महिना बितिसक्दा पनि उनी अझै सामाजिक दुरी पालना गरेर बस्छन् । उनी अहिलेसम्म आफन्तको घरमा पुगेका छैनन् र उनको घरमा पनि प्रायः आफन्तहरु आउँदैनन् । उनलाई भेट्न आउँनेहरु परै बस्छन् ।
‘म निको भएर घर फर्किसकेपछि अहिलेसम्म पनि सबै सँगै बसेको छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा अर्काे घर छ त्यहाँ म एक्लै बस्छु । खाना खाँदा मात्रै सबैसँग भेट हुन्छ । त्यसपछि फेरि छुटिन्छौँ ।’
दरिलो आत्मविश्वासले कोरोना पराजित गरेको बताउने उनी अरुलाई पनि यस्तै सुझाव दिन्छन् । कोरोना संक्रमण, त्यसपछिको अवस्था र उनको भोगाइमा केन्द्रित भएर ती युवकसँग अनलाइनखबरका लागि भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानी :
अहिले कस्तो छ तपाईंलाई ?
एकदम ठीक छु । स्वस्थ छु ।
आफन्त, छिमेकीहरु भेट्न आउँछन् ?
आउँदैनन् । उनीहरु पनि यता आउँदैनन् । हामी पनि कसैको घरमा जान्नौँ । घर नजिकै पसल छ । त्यहाँ पनि जान्न । जान खोज्दा पनि बुवा-आमाले जान दिनुहुन्न ।
उपचार गरेर फर्किएपछि कसैले फरक व्यवहार गरे ?
सुरु सुरुमा केही फरक व्यवहार भयो । तर, त्यो कुरा उनीहरुले बताएनन् । मलाई पनि नरमाइलो लाग्थ्यो ।
अहिले त्यस्तो केही छैन । सबै ठीक छ । बुझ्ने मान्छेहरु धेरैले बुझेका छन् । अहिले धेरैले तँलाई केही भएको छैन भन्छन् । मलाई सुरुदेखि नै लक्षण पनि देखिएन । त्यसैले पनि होला धेरैले अझै पनि संक्रमित हो भन्दा अचम्म मान्छन् ।
तपाईं चैत ११ गते हजार जनाको भिडमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि गाडि र रिक्सा हुँदै घर पुग्नु भयो । कहाँ, कसरी संक्रमण भयो जस्तो लाग्छ ?
मलाई त अझै पनि कहाँबाट संक्रमण भयो भन्नेबारे थाहा छैन । मलाई कसरी सर्‍यो म आफैं अचम्ममा परेको छु । त्यति सजिलै सर्ने भए मबाट पनि त अरुलाई सर्न सक्थ्यो होला । तर, मबाट कसैलाई सरेन । मसँगै बस्ने, खानेलाई पनि केही भएको छैन । उनीहरुलाई केही नभएको कुराले म धेरै खुसी छु, तर मलाई कसरी संक्रमण भयो भन्नेबारे आफैं अचम्ममा परेको छु ।
कैलालीको पहिलो संक्रमितले अस्पतालमा भर्ना हुँदा कसैले चासो नदिएको, पानी पनि नपाएको गुनासो गरेका थिए । तपाईंले कस्ता समस्या झेल्नु पर्‍यो ?
मैले त्यस्तो समस्या भोग्नु परेन । डाक्टरहरुले पनि राम्रोे व्यवहार गरे । कहिले आउँथे, कहिले आउँदैनथे । नआए पनि फोन सधैं गर्थे । बेलाबेलामा मनोबल बढाउन भन्थे ।
अस्पतालमा उपचाररत हुँदा संक्रमितहरुबीच कुराकानी हुन्थे ?
कस्ता कुरा हुन्थे ?
रमाइला कुराकानी पनि हुन्थे । हामी ३/४ जना थियौँ । टाढा-टाढा बसेर गफ गर्थ्यौं । सुरुमा मलाई धनगढी लैजाँदा सबैलाई एउटै कोठामा राखेको थियो । त्यो बेला सबै जनाबीच कोरोना कसरी सर्‍यो भन्नेबारे कुरा हुन्थ्यो ।
मलाई सुरुमा कोरोना लागेको छ भनेर त्यहाँ लगेको थिएन । शंकाको आधारमा मलाई लगेको थियो । पछि पुष्टि भयो । एक जोर कपडाले मैले १६ दिन बिताएँ । सबैको आ-आफ्नो समस्या र पीडा रहेछ । मैले त्यही बेला कुराकानी हुँदा थाहा पाएँ ।
विश्वमा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेका बेला तपाईं संक्रमित हुनु भएको थियो । मनमा कत्तिको डर थियो ?
मलाई त्यस्तो डर भएन । कोरोना हुँदा रुघा लाग्छ, खोकी लाग्छ भन्थे मलाई त केही पनि भएको थिएन । त्यसैले म ठीक छु जस्तो लागेको थियो । त्यसैले पनि होला मनमा डरभन्दा बढी विश्वास पलाएको थियो । सुरुदेखि नै म चाँडै ठीक हुन्छु । चाँडै घर फर्किन्छु भन्ने लागेको थियो ।
निको भएर घर फर्किंदा कस्तो लाग्यो ?
घर फर्किंदा निकै खुसी थिएँ । मभन्दा बढी आफन्त, घर परिवार खुसी भए ।
पछिल्लो समय निको भएर घर फर्किएका केहीमा पुनः संक्रमण देखिएको छ । यो विषयमा कति गम्भीर हुनुहुन्छ ?
म आएको एक महिना पूरा भइसकेको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो केही समस्या छैन । घर आएको यति दिनसम्म पनि मलाई केही फरक परेको छैन । स्वस्थ छु । तन्दुरुस्त छु । अनि फुर्तिलो पनि छु ।
घरमा सामाजिक दूरी पालना गर्नुहुन्छ ?
कोरोना संक्रमण रोक्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय यही हो भनेका थिए डाक्टरहरुले पनि । त्यसैले निको भएर फर्किसकेपछि अहिलेसम्म पनि घरमा सबै परिवार सँगै बसेका छैनौँ ।
हाम्रो एउटा अर्काे घर छ । त्यहाँ म एक्लै बस्छु । खाना खाँदामात्रै सबैसँग भेट हुन्छ । त्यसपछि म जान्छु । खाना खाँदा पनि अरु सबै सँगै बस्छन् म केही पर बस्छु ।
१६ दिनमा कोरोना जित्नु भएको थियो । कसरी निको हुँदो रहेछ कोरोना ?
पहिलो कुरा त आफूमा आत्मविश्वास चाहिने रहेछ । मलाई केही भएको छैन, म ठीक हुन्छु भन्ने कुरा सबैभन्दा ठूलो रहेछ । त्यसपछि खाना र सरसफाइमा पनि बढी ध्यान दिनुपर्ने रहेछ । व्यायाम, योगा र कसरत पनि महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । डाक्टरले भने अनुसार गरेपछि निको भइँदो रहेछ ।
घर फर्किएपछि कसरी बित्दै छ दिन ?
घरमा आइसकेपछि खेती किसानी त गर्नै पर्‍यो । खेत जोत्ने, धानको लागि बिउ राख्ने काममा व्यस्त छु अहिले ।
बिहेपछी रमेश प्रसाईकी पत्नि नन्दा पहिलो पटक मिडियामा, पति रमेश र सासुको गरिन् मुक्त कण्ठले प्रशंसा
Posted on December 8, 2020 Author khabar silo
काठमाडौँ । नेपालीहरु माझ लोकप्रिय रहेका रमेश प्रसाई विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् । उनले कालीकोटकी समाजसेवी नन्दा सिंहसँग सोमबार हिन्दु परम्परा अनुसार लगनगाँठो कसेका हुन् ।*भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला * उनको विवाह समारोह धरान नगरपालिका वडा नं १ स्थित उद्योग बाणिज्य संघको पार्टी प्यालेसमा आयोजना भएको थियो बिवाह समारोहमा दुबै तर्फका नजिकका आफन्त र […]
भा’गरथी ह’त्या प्र’करण: प्रहरीको श’ङ्काको घे’रामा र’हेका ए’क पु’रुषको श’रीरमा चो’टपटक
Posted on February 16, 2021 February 16, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं– प्रहरीले भा’गर’थीको ह’त्या’रा चाँडै पत्ता ला’ग्ने दा’बी गर्दै आएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार बुटवलमा पु’गेर भा’ग’रथी र नि’र्म’ला’का अ’परा’धीलाई पा’नीमु’नि ग’एपनि न’छोड्ने दा’वी गरे ।प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरीसम्म भा’गरथी घ’टनालाई लिएर अ’पराधी पक्राउ ग’र्नेमा नि’र्धक्क देखिएको छ। आ’खिर प्रहरीले त्यस्तो के क्लु भेटायो त, यस्तो दा’वी ग’र्न? प्रहरीको श’ङ्काको घे’रामा रहेका एक […]
सिमा बिबादबारे नेपालको नाम लिँदै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले गरे यस्तो कडा ट्वीट, हल्लियो भारत